Chii Chinonzi Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha? | Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bicol Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Chii Chinonzi Dare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha?
Dare Rinotungamirira iboka duku revaKristu vane ruzivo rwakakura panyaya dzokunamata uye ndiro rinopa Zvapupu zvaJehovha pasi rose mirayiridzo. Boka iri rinoita mabasa maviri:
Rinoona nezvezvinhu zvinonyorwa mumabhuku anotsanangura Bhaibheri, zvinodzidzwa pamisangano uye pazvikoro neZvapupu zvaJehovha.​—Ruka 12:42.
Rinoona nezvebasa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha pasi rose uye rinotungamirira basa rokuparidza uye mashandisirwo anoitwa mari dzezvipo.
Dare Rinotungamirira rinotevedzera zvaiitwa ‘nevaapostora nevarume vakuru vaiva muJerusarema’ pakatanga chiKristu, avo vaimiririra ungano yose yechiKristu pazvinhu zvavaisarudza. (Mabasa 15:2) Saka nhengo dzeDare Rinotungamirira dzinoshandisa zvinotaurwa neBhaibheri pazvinhu zvavanoita dzichiratidza kuti dzinobvuma kuti Jehovha Mwari akagadza Jesu Kristu kuti ave Musoro weungano.​—1 VaKorinde 11:3; VaEfeso 5:23.
Ndivanaani vari muDare Rinotungamirira?
Kubva muna January 2018, vari muDare Rinotungamirira ndiKenneth Cook, Jr., Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson, naDavid Splane. Vanoshanda vari pamahofisi edu makuru ari kuWarwick, New York, U.S.A.
Dare Rinotungamirira rakarongwa sei?
Dare Rinotungamirira rine makomiti 6 anotarisira mabasa akasiyana-siyana uye mumwe nomumwe wavo anoshanda mukomiti imwe kana maviri.
Komiti Yevanoronga: Inoona nezvenyaya dzemumatare uye inobatsira kana paitika njodzi, kana kuti Zvapupu pazvinotambudzwa panyaya dzechitendero uye dzimwewo nyaya dzinofanira kukurumidza kugadziriswa dzine chokuita neZvapupu zvaJehovha.
Komiti Yevashandi: Inoona nezvevanhu vanoshanda paBheteri.
Komiti Inobudisa Mashoko: Inoona nezvekudhindwa, kutumirwa kwemabhuku eBhaibheri uye kuvakwa kwezvivako zvinoshandiswa pakunamata, mahofisi eshanduro nezvivako zvinoshandiswa nebazi.
Komiti Yebasa: Inoona nezvebasa redu rokuparidza “mashoko akanaka oumambo.”​—Mateu 24:14.
Komiti Yekudzidzisa: Inoona nezvezvinhu zvinodzidzwa pamisangano, pazvikoro zvinorongwa nesangano uye zvinhu zvinorekodhwa zvakadai semavhidhiyo nezvimwewo.
Komiti Yekunyora: Inoona nezvokunyorwa uye kushandurwa kwemabhuku edu uye zvinhu zvinoiswa panzvimbo yedu yepaIndaneti.
Kunze kwezvataurwa pamusoro apa, vhiki roga roga Dare Rinotungamirira rinoungana kuti rikurukure zvinhu zvinenge zvichidiwa musangano. Pavanoita misangano iyi, vanoshandisa zvinotaurwa neMagwaro uye vanobvumira mweya mutsvene waMwari kuti uvatungamirire pane zvose zvavanosarudza.​—Mabasa 15:25.
Ndivanaani vanobatsira Dare Rinotungamirira?
Boka revaKristu vakavimbika ndiro rinobatsira makomiti eDare Rinotungamirira. (1 VaKorinde 4:2) VaKristu ava vanhu vane unyanzvi uye vava nenguva yakareba vachiita basa rinoenderana nekomiti yavanenge vari. Makomiti avanoshanda maari paanoita misangano yawo vhiki nevhiki vanhu ava vanovabatsira vanenge varipowo. Vanopawo mazano nemashoko anogona kubatsira Dare Rinotungamirira pakuzoziva zvokusarudza uye kana Dare Rinotungamirira riine zvarasarudza vanhu ava ndivo vachaona kuti zvasarudzwa zvacho zvashandiswa here. Dare Rinotungamirira rinogonawo kutuma vanhu ava kune dzimwe nyika kuti vanosimbisa vatinonamata navo kana kuti vanodzidzisa pamusangano wepagore kana kuti pamusangano wevanhu vanenge vapedza kudzidza kuchikoro cheGiriyedhi.
MAZITA EVANHU VANOBATSIRA
Bhaibheri rinoratidza kuti nei vaKristu vechokwadi vachiita zvinhu zvakarongeka, uye kuti vanoita sei basa ravo.
Muzana remakore rokutanga, boka duku revarume vakuru nevaapostora raishumira sedare rinotungamirira muungano yechiKristu. Ko nhasi?
Mune zvinzvimbo here? Ndivanaani vanoshumira sevashumiri vakagadzwa?
Ndakafirwa naBaba Ndikawana Vamwe Baba
Kutanga Neurombo—Kuguma Nemakomborero